स्वयंसेवक खटाएर लकडाउनमा प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेका छौं : मीना जोशी–अध्यक्ष, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र, विराटनगर
कोशी अनलाइन आइतबार, ०४ जेठ, २०७७ मा प्रकाशित
सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र कस्तो संस्था हो ?
छोटो, मीठो परिभाषा दिनुपर्दा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले प्रहरी र नागरिकबीच पुलको भूमिका खेल्ने गर्छ । प्रहरीको तुलनामा जनमानसको संख्या धेरै छ । प्रहरीको सेवा पुग्न नसकेको ठाउँमा यो संस्थाले सेवा प्रदान गर्ने काम गर्छ ।
संस्थाको स्थापना कहिले भयो ?
२०५८ सालमा नेपालमै पहिलो पटक मोरङ, विराटनगरस्थित तीनपैनीमा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको स्थापना भएको हो । पहिले ‘मञ्च’, त्यसपछि ‘जनसेवा मञ्च’ हुँदै हाल ‘सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रमा फेरिएको हो ।
यो संस्थाले कस्तो काम गर्छ ?
संस्थाको नाम जस्तो छ काम पनि त्यस्तै गर्नेगर्छ । यो संस्थाले समुदायमा घट्ने हरेक किसिमको अपराधहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने काम गर्छ । समाजमा पीडित भएर बसेकालाई न्याय दिने, बाटो बिराएकालाई बाटो देखाउँने काम गर्छ ।
संस्थामा कस्तो–कस्तो समस्याहरू लिएर मानिसहरू आउने गर्छन् ?
संस्थामा प्रायः सबै खालका समस्याहरू आउने गर्छ । जस्तै बाल शोषण, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, लागूऔषध, जग्गा विवाद, घर भाडासम्बन्धी विवाद आदि । सामान्य रूपमा बुझ्ने हो भने समाजमा दैनिक घटिरहने समस्याहरू लिएर मानिसहरू आइरहन्छन् । धेरैजसो लागूऔषध र घरेलु हिंसाको समस्या आउने गर्छ ।
केन्द्रमा मासिकरूपमा कतिजति समस्याहरू आउने गर्छ ?
हरेक महिना यति नै समस्या आउँछ भन्ने त हुँदैन । तर कम्तिमा पनि प्रत्येक महिना दुईटा समस्याचाहिँ आउँने गर्छ ।
समस्या समाधानबाहेक यो संस्थाले अन्य के के काम गर्छ ?
संस्थाको पहिलो प्राथमिकता भनेको निवेदन परेका समस्याहरुको समाधान गर्नु नै हो । तर यसका अलवा संस्थाले आम नागरिकहरूमा सचेतना, महिला हिंसाविरुद्ध चेतना, जुवा, तास, मदिरा तथा लागूऔषध नियन्त्रण, महिला सशक्तीकरण, विभिन्न टोल संगठनसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, विद्यालयमा विभिन्न खाले सचेतना कार्यक्रम, सीपमूलक तालिम, स्वास्थ्य शिविर, खेलकुद र घरदैलो लगायतका कार्यक्रमहरू परिचालन गर्ने गर्छ ।
समाजमा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र स्थापना भएदेखि कस्तो परिवर्तन आएको छ ?
सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको स्थापना भएयता समाज वरिपरि घटिरहने अपराधहरू न्यून हुँदै गएको छ । समस्याका समाधानबाहेक समाजमा त्यस्ता समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै निर्मूल पार्नसमेत हामी लागि परिरहेका छौं । निम्न वर्गका, उत्पीडित साथै समाजका प्रतिष्ठित मानिसहरू पनि आफूलाई परेको समस्या समाधानका लागि हामीकहाँ निर्धक्क र नलजाई आउने गर्छन् ।
‘हर प्रहर, गाउँ र नगरी, टोल टोलमा नेपाल प्रहरी’ भन्ने नारा जस्तै केन्द्रको काम भएको छ त ?
नतिजा तपाईंहरूकै अगाडि छ । यदी नारामा उल्लेख गरिएअनुसार काम नभएको भए यतिका मानिसहरूको विश्वास जित्न सक्दैन थियौं होला । २०५८ सालमा स्थापना भएको यो संस्था आजको दिनसम्म टिकिरहन सक्दैनथ्यो होला ।
नेपाली समुदायमा अझै पनि प्रहरीलाई खुलेर आफ्नो समस्या भन्न सक्ने बानीको विकास भइसकेको छैन । अझ १८ वर्ष अगाडिको अवस्था कस्तो थियो होला तपाईं आफैं अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आम मानिस र नेपाल प्रहरीबीच सजिलो समन्वय हुने विश्वासका साथ नेपालमै पहिलो पटक यो संस्था विराटनगरमा स्थापना भएको हो ।
लकडाउनले संस्थालाई कस्तो असर पारेको छ ?
लकडाउनमा संस्थालाई खासै समस्या परेको छैन । तर लकडाउनमा आम नागरिकलाई समस्या नपरेको भने होइन । हामीमा निवेदन आइसकेपछि मात्रै हामीले त्यस विषयमा अनुसन्धान गरेर समाधान गर्ने हो । अहिलेको अवस्थामा समस्या परेका मानिसहरू निवेदन दिनका लागि संस्थामा आइपुग्न सक्ने वातावरण छैन । लकडाउनले पारेको असर भनौं या समस्या, यहीँ नै हो ।
सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले लकडाउनको बेला आफ्नो कर्तव्य कसरी बहन गरिरहेको छ ?
संस्थामा उजुरी नआए पनि यस्तो महामारीमा १८ जना स्वयंसेवक सुरक्षित तरिकाले खटाएर सहयोग गरिरहेको छ । आगामी दिनमा गर्नेुपर्ने सहयोगका लागि हाम्रो सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र सधैं तयार रहने छ ।
प्रस्तुति– बबिता लिम्बू
बिओपीमा भारतीयको आक्रमण प्रयास, एक राउण्ड हवाई फायर
सामान्य विवादमा मन्दीपकाे हत्या गरेको आरोपमा चारजना पक्राउ
कोरोना संक्रमितमा डेंगु देखियो
भारतबाट छोरासँगै आएकी थिइन् विराटनगरकी संक्रमित महिला
सामाजिक दुरी कायम गरि माेरङका जिम क्लब खोल्न माग
बजेट वक्तब्य : सामुदायिक विद्यालय निजीलाई जिम्मा दिने कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रीकाे असन्तुष्ठी